“အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုလူငယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့မှ ကိုယ်စားလှယ် ငါးဦးအဖွဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်လေ့လာ” | NLD
Home ဗဟိုလူငယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့သတင်းများ “အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုလူငယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့မှ ကိုယ်စားလှယ် ငါးဦးအဖွဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်လေ့လာ”
“အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုလူငယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့မှ ကိုယ်စားလှယ် ငါးဦးအဖွဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်လေ့လာ”
Posted By: mygate wayon: စကျတငျဘာ 09, 2018 In: ဗဟိုလူငယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့သတင်းများ, ကော်မတီသတင်းများNo Comments
၂၀၁၈ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ၊ ၉ရက်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုလူငယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့မှ ကိုယ်စားလှယ် ငါးဦးအဖွဲ့ သည် Japan-Myanmar Association (JMA) အဖွဲ့၏ဖိတ်ကြားချက်အရ စက်တင်ဘာလ ၂ရက်နေ့မှ ၈ရက်နေ့အထိ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ သွားရောက်လေ့လာခဲ့သည်။ ၇ ရက်တာ လေ့လာရေးခရီးစဉ်အတွင်း ဗဟိုလူငယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့ ၊ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် မြန်မာနိုင်ငံကို အဓိက ကူညီပံ့ပိုးနေသော Japan International Cooperation Agency(JICA)အသင်း၏ ဥက္ကဌ Mr. Shinichi Kitaoka နှင့် သွားရောက် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ထို့နောက် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ အာဏာရပါတီမှ လွှတ်တော်အမတ်များ၊ အတိုက်အခံပါတီမှ လွှတ်တော်အမတ်များနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံ၏ လက်ရှိနိုင်ငံရေး အခြေအနေများ၊ လွှတ်တော်ဖွဲ့စည်းပုံများကို လေ့လာခဲ့ပြီး သိရှိလိုသည်များကို မေးမြန်းခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဂျပန်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးနှင့်ပတ်သတ်သော အယူအဆများ ၊ ခေတ်မီဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာများ ၊သဘာ ဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု အနည်းဆုံးကျောက်မီးသွေးသုံး လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးစက်ရုံ၏ နည်းပညာများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ မူပိုင်ခွင့် ဥပဒေများကိုလေ့လာခဲ့သည်။
ထို့နောက် ဗဟိုလူငယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့ ၊ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် Niigata ခရိုင်ရှိ ခရိုင်အစိုးရအဖွဲ့၊ ခရိုင် လွှတ်တော်အမတ်များနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး လယ်ယာစိုက်ပျိုးလေးနည်းပညာများ၊ အသေးစား နှင့် အလတ်စား စက်မှုလုပ်ငန်းများကိုလေ့လာခဲ့သည်။ထို့နောက် Niigata ခရိုင်အတွင်းရှိ International University of Japan သို့သွားရောက်ခဲ့ပြီး ယင်းတက္ကသိုလ်တွင် ပညာသင်ကြားနေသော မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျောင်းသူကျောင်းသားများနှင့် ရင်းရင်းနှီးနှီး တွေ့ဆုံ နှုတ်ဆက်ခဲ့ကြသည်။
ထို့နောက် ၇. ၉. ၂၀၁၈ ရက်နေ့ ညပိုင်းတွင် JMA အသင်း ဥက္ကဌ Mr. Hideo Watanabe မှ ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲဖြင့်တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့သည်။ ဧည့်ခံပွဲသို့ JMA မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးသူရိန်သန့်ဇင်မှ တက်ရောက် ချီးမြှင့်ပေးခဲ့သည်။
ထို့နောက် ၈.၉.၂၀၁၈ ခုနှစ် ညနေ ၄:၀၀နာရီ အချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိပြီး လေ့လာရေးခရီးစဉ် အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးခဲ့သည်။
“အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ ဗဟိုလူငယျလုပျငနျးအဖှဲ့မှ ကိုယျစားလှယျ ငါးဦးအဖှဲ့ ဂပြနျနိုငျငံသို့ သှားရောကျလလေ့ာ”
၂၀၁၈ခုနှဈ၊ စကျတငျဘာလ၊ ၉ရကျ။
အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျ ဗဟိုလူငယျလုပျငနျးအဖှဲ့မှ ကိုယျစားလှယျ ငါးဦးအဖှဲ့ သညျ Japan-Myanmar Association (JMA) အဖှဲ့၏ဖိတျကွားခကျြအရ စကျတငျဘာလ ၂ရကျနမှေ့ ၈ရကျနအေ့ထိ ဂပြနျနိုငျငံသို့ သှားရောကျလလေ့ာခဲ့သညျ။
၇ ရကျတာ လလေ့ာရေးခရီးစဉျအတှငျး ဗဟိုလူငယျလုပျငနျးအဖှဲ့ ၊ ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့သညျ မွနျမာနိုငျငံကို အဓိက ကူညီပံ့ပိုးနသေော Japan International Cooperation Agency(JICA)အသငျး၏ ဥက်ကဌ Mr. Shinichi Kitaoka နှငျ့ သှားရောကျ တှဆေုံ့ခဲ့သညျ။
ထို့နောကျ ဂပြနျနိုငျငံ၏ အာဏာရပါတီမှ လှတျတျောအမတျမြား၊ အတိုကျအခံပါတီမှ လှတျတျောအမတျမြားနှငျ့ တှဆေုံ့ခဲ့ပွီး ဂပြနျနိုငျငံ၏ လကျရှိနိုငျငံရေး အခွအေနမြေား၊ လှတျတျောဖှဲ့စညျးပုံမြားကို လလေ့ာခဲ့ပွီး သိရှိလိုသညျမြားကို မေးမွနျးခဲ့သညျ။ ထို့နောကျ ဂပြနျနိုငျငံ၏ စီးပှားရေးနှငျ့ပတျသတျသော အယူအဆမြား ၊ ခတျေမီဆကျသှယျရေး နညျးပညာမြား ၊သဘာ ဝပတျဝနျးကငျြ ထိခိုကျမှု အနညျးဆုံးကြောကျမီးသှေးသုံး လြှပျစဈဓါတျအားပေးစကျရုံ၏ နညျးပညာမြား၊ ဂပြနျနိုငျငံ၏ မူပိုငျခှငျ့ ဥပဒမြေားကိုလလေ့ာခဲ့သညျ။
ထို့နောကျ ဗဟိုလူငယျလုပျငနျးအဖှဲ့ ၊ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့သညျ Niigata ခရိုငျရှိ ခရိုငျအစိုးရအဖှဲ့၊ ခရိုငျ လှတျတျောအမတျမြားနှငျ့ တှဆေုံ့ခဲ့ပွီး လယျယာစိုကျပြိုးလေးနညျးပညာမြား၊ အသေးစား နှငျ့ အလတျစား စကျမှုလုပျငနျးမြားကိုလလေ့ာခဲ့သညျ။ထို့နောကျ Niigata ခရိုငျအတှငျးရှိ International University of Japan သို့သှားရောကျခဲ့ပွီး ယငျးတက်ကသိုလျတှငျ ပညာသငျကွားနသေော မွနျမာနိုငျငံမှ ကြောငျးသူကြောငျးသားမြားနှငျ့ ရငျးရငျးနှီးနှီး တှဆေုံ့ နှုတျဆကျခဲ့ကွသညျ၊
ထို့နောကျ ၇. ၉. ၂၀၁၈ ရကျနေ့ ညပိုငျးတှငျ JMA အသငျး ဥက်ကဌ Mr. Hideo Watanabe မှ ဂုဏျပွုညစာစားပှဲဖွငျ့တညျခငျးဧညျ့ခံခဲ့သညျ။ ဧညျ့ခံပှဲသို့ JMA မှ တာဝနျရှိသူမြား၊ ဂပြနျနိုငျငံဆိုငျရာ မွနျမာသံအမတျကွီး ဦးသူရိနျသနျ့ဇငျမှ တကျရောကျ ခြီးမွှငျ့ပေးခဲ့သညျ။
ထို့နောကျ ၈.၉.၂၀၁၈ ခုနှဈ ညနေ ၄:၀၀နာရီ အခြိနျတှငျ မွနျမာနိုငျငံသို့ပွနျလညျရောကျရှိပွီး လလေ့ာရေးခရီးစဉျ အောငျမွငျစှာပွီးဆုံးခဲ့သညျ။
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံသို့ အလုပ်သဘောခရီးသွားရောက်မည်